PanPanChitရဲ့ ဒီကနေ့ ရုံးတက်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » PanPanChitရဲ့ ဒီကနေ့ ရုံးတက်ပုံ
PanPanChitရဲ့ ဒီကနေ့ ရုံးတက်ပုံ
Posted by panpan on Aug 18, 2011 in Creative Writing | 26 comments
ဒီကနေ့ ရုံးတက်ပုံ ၀န်ခံခြင်းအနုပညာ
သဂျီးရဲ့ ၀န်ခံခြင်းအနုပညာကို ဒီကနေ့ချသုံးလိုက်ပါပြီ
သူများပဲလက်ညိုးထိုးနေတဲ့ ကျွန်မ၊ ကျန်တဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ထိုးနေတယ်ဆိုတာ သတိမထားလိုက်မိဘူး
ဘာလဲဆိုတော့ ခုတလောရွာထဲခေတ်ထနေတဲ့ အ၀တ်အစားကိစ္စပဲ
ဒီကနေ့ ကျွန်မ၀တ်ထားတာ ဂျင်းစကတ်အတို(ဒူးအထက်)နဲ့ တီရှပ်၊
တီရှပ်ကလည်း ဆယ်ကျော်သက်တွေဝတ်တဲ့ sport ဒီဇိုင်းတီရှပ်
ဖိနပ်ကတော့ ကြိုးမှာသစ်သားစေ့လေးတွေ ပြည့်နေအောင်စီထားတဲ့ ဖန်စီဖိနပ်
အဲဒါပြောတာလေ၊ သူ့နေရာနဲ့သူ သင့်တင်လျောက်ပတ်အောင်ဝတ်ဖို့ဆိုတာ
ဒါကဒီကနေ့တစ်ရက်ပဲ ဒီလိုဝတ်တာလား၊ အရင်နေ့တွေကရော
သိပ်တော့မကွာဘူး၊ အရင်နေ့တွေလည်း ဂျင်းရှော့ပင်၊ ဂျင်းအရှည်ဘောင်းဘီ၊ တခါတခါစတိုင်ဘောင်းဘီပေ့ါ
အရပ်ကပုပု လူကောင်သေးသေး ဘာအလုံးအထည်မှမရှိတော့
အဒေါ်က ကျွန်မထမီဝတ်ထားရင် ၀ါးခြမ်းပြားလေးအ၀တ်ပတ်ထားသလိုပဲလို့ ချီးမွမ်းရှာတယ်
ပြီးတော့ ကျွန်မက ထမီကိုရှည်မှကြိုက်တယ်
ဖြတ်ဝတ်၊ ခေါက်ဝတ်တာလည်း မကြိုက်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ အရပ်ကလေးပုပုနဲ့ စည်ပင်သာယာပေ့ါ
လူတိုင်းလိုလို(ရင်းနှီးသူတွေ)က ပြောကြတယ် “နင်နဲ့ ထမီလုံးဝမလိုက်ဘူး၊ မ၀တ်ပါနဲ့”တဲ့
ဥပုသ်ကျောင်းသွားရင်၊ ဆွမ်းလောင်းရင်တော့ ထမီနဲ့ပေ့ါ
အမြဲတွေးမိတာက ငါအပြင်သွားလို့ အချိုးမပြေတာဖြစ်ခဲ့ရင် ရွာထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကများ
အဲဒါကြောင့် ၀န်ခံတာ၊ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ထောင်းတာ သူများထောင်းတာထက်တော့ သက်သာတာပေ့ါ
အဲဒါကြောင့်ဝန်ခံပါရဲ့ ဒီကနေ့ရုံးတက်အ၀တ်အစားက တီရှပ်နဲ့ ဂျင်းစကတ်တိုပါလို့
မနက်ကအ၀တ်ထုတ်နေတုန်းစဉ်းစားမိတာက ငါဒီကနေ့ meeting roomထဲဝင်ရမှာလား မ၀င်ရဘူးဆိုတော့ အိုကေတယ်
meeting roomထဲမှာက အရမ်းအေးတယ်လေ
ဒီကနေ့တော့ အဲဒီဒုက္ခလည်း ခံစားစရာမလိုတော့ အေးဆေးပေ့ါ
ထိုင်ခုံမှာထိုင်လိုက်ရင်တော့ စကပ်လေးက ပေါင်လည်ထိ တိုတက်သွားတာလေးတစ်ခုပဲ
ဒါ့ကြောင့် ထိုင်ခုံမှာထိုင်လိုက်ရင် လူရောထိုင်ခုံရော စားပွဲအောင်ကို လျှောဝင်လိုက်တာပေ့ါ (ဘာရမလဲ)
အဒါနဲ့ စစ်တမ်းပြန်ကောက်တယ် မ၀တ်တဲ့ဘက်ကများလို့ ပယ်လိုက်ရော
ရုံးမှာလည်း ၀တ်ကြတဲ့ဒီဇိုင်းတွေက ပုံစံစုံပါပဲ
Freeပေ့ါ၊ ဒါပေမယ့် လန်ပျံနေအောင်တော့ ၀တ်လို့မရပါဘူး
သဂျီးပြောသလိုပေ့ါ Microsoft ကစလိုက်တဲ့ ပုံစံပဲပြောရမလား
ဒီကနေ့ တီရှပ်တောက်တောက်Sportဒီဇိုင်းနဲ့ ဂျင်းစကပ်တိုတို၊ ဖိနပ်ကဖန်စီပုံစံနဲ့ PanPanChitတစ်ယောက် ရုံးတက်ပုံကို
(လမ်းမှာတွေ့ရင်လည်း PanPanChitများဖြစ်နေမလားဆိုပြီး ဖြည့်တွေးပေးကြပါ၊ ရွာထဲမှာတော့ ကမ္ဗည်းမတင်လိုက်ကြပါနဲ့နော်)
အိမ်း…. အဘတို့ကတော့ အဲလိုလေးတွေဝတ်ရင် သိပ်မပြောချင်ပါဘူးကွယ်
မျက်စိထဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာအောင် ရေးတတ်ပါပေတယ်
ပုံလေးပါ တွဲတင်လိုက်ရင်တော့ နောင်လူမမှားတော့ဘူးပေါ့ကွယ်
တော်ကြာအွန်စောနဲ့ အမြွှာညီအစ်မလို့ ထင်နေကြပါဦးမယ်
မနောကတော့ တစ်ခါတလေမှ ယူနီဖောင်းစကပ်တိုကို ၀တ်ပါတယ်။ မိုးရွာတဲ့အခါပေါ့ ရေမစိုအောင် ၀တ်တာ ကျန်တဲ့ရက်တော့ သိပ်မ၀တ်ဖြစ်ဘူး။ သွားရတာလည်း လွတ်လပ်တယ်လေ။ ဘယ်ချိန်ပြန်ပြန် အမြင်လည်းမရိုင်းတော့ဘူး။ တစ်ခါတလေ ယူနီဖောင်းအကျီတော့ဝတ်တယ်။ စကပ်တိုအစား ဘောင်းဘီရှည်ကို တွဲဝတ်တယ်။
သြ လက်စသတ်တော့ ဟိုနေ့ကတွေ့လိုက်တာ pan pan ကိုး။
တို့လည်း ထမိန် ကို ဘုရားသွားကျောင်းတက်၊ ရိုးရာပွဲက လွဲရင် သိပ်မ၀တ်ဖြစ်တော့ဘူး
အိမ်နေရင်းဆို စပန့်သို့်မဟုတ် မြင်းခြံချည်ထည် ၀မ်းဆက် ( အကျီဘောင်းဘီ တို၊ ရှည် ခပ်ပွပွ ၊ )တွေအမြဲဝတ်တယ်
လွတ်လွတ် လပ်လပ်ရှိလို့ ။ အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ ဘဏ်သော်လည်းကောင်း ၊ city mart ၊ စတိုးဆိုင် ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်နေတတ်တယ်။ ရုံးမှာ မလုပ်လို့ ယူနီဖောင်းတော့ တခါမှ မ၀တ်ဖူးဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်စုံလေးတွေကို သဘောကျတယ်။ အိမ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တော့ အိမ် နဲ့ အလုပ်ရုံတွဲထားလို့ အိမ်နေရင်း ၀တ်စုံနဲ့ပဲ အနေများတယ်။ရံဖန်ရံခါ မလွှဲသာလို့ အိမ်ကစက်ရုံ သွားရလည်း ဒီပုံစံပဲ။ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနဲ့ အပြင်ထွက်ရင်တော့ ဂျင်းမှ ဂျင်းပဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ချည်ဘောင်းဘီလေးတွေ လည်းသဘောကျလို့ ၀တ်တယ် ။ စကပ်က မကြိုက်လို့ မ၀တ်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ ၀တ်စုံကိုတော့ တန်ဖိုးထားတယ်။ အမြဲမ၀တ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းလေ။
ဆံပင် ဆေးဆိုးရတာလည်း ကြိုက်လို့ စိတ်ကူးပေါက်ရင် အညိုရောင် ဖျော့ဖျော့လေးဆိုးတယ်။ သနပ်ခါးတော့အရမ်းကြိုက်တယ်။
ရေကူးသင်တုန်းကလည်း ရေကူးဝတ်စုံ ၀တ်တယ်။ ထမိန်ဝတ်ပြီးသင်လို့မှ မရတာလေ။ ဟီး
တို့လည်း pan pan နဲ့ ရောပြီး ၀န်ခံခြင်းအနုပညာ လုပ်ကြည့်တာ ..
မြင်းခြံချည်ထည်ကတော့ မြင်းခြံမှာ နဗျင်းထည်လို့ခေါ်ပါတယ် (စာလုံးပေါင်းလွဲမလားမသိ)
အဲဒီ မှာ စတွေ့ တာပဲ
အင်း .. ပန်ပန်တို့ ရုံးက ဒီမိုကရေစီရထားလို့ ဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်တွေဆီမှာ ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ်ဝတ်လျှင်တောင် မျက်စိ ဆံပင်မွှေးဆူးတယ် … ။ ရှေ့တင် တမျိုး ၊ ကွယ်ရာတမျိုး … အဲ့ဒါတွေ ကြည့်မရလို့ … အခု ယူနီဖောင်းပဲ ငါးရက်ဝတ်ရမယ် ဖြစ်ကုန်တယ် … ။
ဘောင်းဘီတိုတိုလေးတွေက အိမ်မှာနေရင်းပဲ ၀တ်ဖြစ်တယ် … အပြင်ထွက်လျှင်မ၀တ်ဖြစ်ဘူး …
အော် မပန်ပန်ရယ် ရွာသားတွေ အပြင်မှာ မြင်သွားမှာ တော့စိုးတယ်ပြောတယ်
အခုကြတော့ ပို.စ်ထဲမှာ ပြောထားလိုက်တာ မျက်စိထဲ တန်းခနဲပဲ….
အင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ.လိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားကို ၀တ်တာအကောင်းဆုံးပဲ
မိန်းကလေးတော်တော် များများကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ FIX SIZE လေးနဲ. တီရှပ်အဖြူလေးတွေနဲ.ဆိုရင် ပိုလိုက်ကြမယ်ထင်တယ်….
အရပ်ပုလို. ဂျင်းကို ဒဲ.ပွလေး ၀တ်ပေါ့ဗျာ…
ခုံအောက် ၀င်ရတဲ့ဒုက္ခ ပေါင်စိရတဲ့ဒုက္ခ လေသလပ်ခံရတဲ့ဒုက္ခ မှ မိန်းကလေးများ ကင်းဝေးပါစေ။။။ စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်……. ဟိဟိဟိ
နွယ်ပင်တို့ အလုပ်ကလဲ ယူနီဖောင်းပဲဝတ်ရတာ
ဒီယူနီဖောင်းကို တစ်ပတ် (5) ရက်ဝတ်ရမယ်ဆိုတော့
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အကျီင်္ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ချုပ်ထားတော့ အဆင်ပြေသလားမမေးနဲ့
ကျန်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ပန်ပန်ဝတ်သလို ဝတ်ဖြစ်ပင်မယ့် သွားရမယ့် နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့
သတိထားပြီး ဝတ်ရတယ် မဟုတ်ရင် ကိုယ့်အဝတ်အစားနဲ့ကိုယ် လူအမြင်ကတ်ခံရမှာ ဆိုးလို့လေ ….
စကပ်ဆို ကျပ်ကျပ် ကားကား အကုန်ကြိုက်။(ပေါင်ရင်းကပ်နေတာမျိုးတော့မ၀တ်ပါ)
ရုံးမှာတော့ ၂ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးထဲကမှ အသက်ပိုငယ်တဲ့ကျွန်မက ၀တ်ချင်ရာ ဗရုတ်သုတ်ခလျှောက်ဝတ်တတ်ပြီး ကျန်တဲ့အမတယောက်ကတော့ ဂျင်းမှဂျင်းပါဘဲ။ ရုံဝန်ထမ်း ၅ယောက်ဘဲရှိတော့ လန်းချင်လန်း ဂွမ်းချင်ဂွမ်း ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒီရုံးမှာပျော်တာ(ကြော်ငြာ)။ pan pan တို့ရုံးလို IT သမားများတဲ့ရုံးတွေကိုလည်းသဘောကျတယ်။
ပန်ပန်က အသက်ငယ်သေးမယ် ထင်တယ်နော်။ ဟုတ်လားဟင် ပုံမတင်ရင်နေပါ အသက်လေးလောက်တော့ပြောပြပါလားဟင်။
မနေ့တနေ့ကပဲ ထားပါတော့ (ဘယ်ချိန်မေးမေး)
ကျမနဲ့ထမီဝတ်တာလုံးဝ မလိုက်လို. ကျမနိုင်ငံခြားမှာအလုပ် လုပ်တာပါ။ (ဘာမှမဆိုင်ဘူး)။
တခါက မောင်လေးက ဘောင်းဘီ အတိုလေး ၀ယ်လာတယ် ပေါင်အလည်လောက်အတိုလေး ညီမလေးအတွက်တဲ့ အငယ်မ ၀တ်တော့ အတော့်ကို လိုက်တာ သူက သေးသေးသွယ်သွယ်လေးကိုး။ ကိုယ်ဆိုရင်တော့ သစ်သားစည်ကို သံပတ်ပတ်ထားတယ်ပဲ ထင်မှာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုကြီးက တချက်လွတ် အမိန့်ထုတ်တယ် ဘယ်တော့မှ မ၀တ်ရတဲ့။ မောင်လေးက လှပါတယ်ဗျလို့ အထွန့်တက်တော့ လှမှန်းသိသားပဲ လှလို့ကို မ၀တ်ခိုင်းတာ သူများတွေ ၀တ်တော့ ငါတို့ ကြည့်ပြီး ပြစ်မှားကြတယ်။ အေး ဒါကြောင့် ငါ့နှမတွေတော့ သူတပါး ကြည့်ပြီး ပြစ်မှားမှာစိုးလို့ မ၀တ်ရပါဘူး ၀တ်တော့ဝတ် ဒူးမပေါ်စေနဲ့တဲ့။
မောင်တွေထက် အစ်ကိုတွေက ပိုပြောတယ်နော်
ဒီလိုခေတ်ကာလမှာ.. ကိုယ်နဲ့လိုက်မယ်ထင်..၀တ်တာဝတ်.. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..။
မလိုက်ပဲနဲ့.. ခေတ်ဆန်ချင်လှပါတယ်ဆိုပြိး.. “အားနဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့”ပေါ့..။
တကယ်တော့.. မြန်မာမိန်းကလေး ထမိန်ဝတ်တာ.. ပိန်ပိန်ပါးပါးလည်း ကြည့်ကောင်းတယ်ထင်တာပဲ..။
ဆံရှည်နဲ့..ရင်ဖုံးအကျီ င်္ဆို.. ပိုတောင်အမြင်လှပါတယ် ..ထင်တာပါပဲ..။
(ကျုပ်ပဲ.ဒိတ်အောက်… .တောကျနေသလားမသိ..မြန်မာမက..ထမိန်နဲ့မှ..ဆက်ခ်စီလို့..ထင်မိတယ်.. )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. မြန်မာလိုပဲ ၀တ်တယ်..။ ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတော့ ..အိုင်ဒတတီဖြစ်လာတာပေါ့..။
သူလို ကမ္ဘာကျော်တယောက်က.. မြန်မာအ၀တ်အစားချည်း… သိသိသာသာဝတ်ပြနေတော့.. ကမ္ဘာတန်းမှာ.. မြန်မာအ၀တ်အစားဖက်ရှင်တန်းဝင်လာတာပေါ့..။
အခု..သူ့အကြောင်းရုပ်ရှင်ထွက်ပြီးရင်.. မြန်မာအကျီထမိန်..ပိုလို့တောင်.. ကမ္ဘာကျော်သွားဦးမယ်..။
ကမ္ဘာဆိုတာက.. ဒီလိုဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်မှာ.. ယဉ်ကျေးမှုတင်မက.. အ၀တ်အစား..ဖက်ရှင်စီးဆင်းတာ..အင်မတန်မြန်တယ်…။
နိုဗယ်ဆုရှင်က.. ဒီလိုချည်းဝတ်ပါလား.လှသားပဲ..ဆိုတဲ့အသိ.. ကမ္ဘာသူ..ကမ္ဘာသားတွေဆီရောက်ရင်.. သူတို့…၀ယ်ဝတ်ကြမှာပေါ့လေ…။
( ဒေါ်စုက… မြန်မာဆန်ပြီး..လှလည်းလှပါတယ်..။ — စကားချပ်)
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ..သန်း ၇၀၀၀လောက်.. ၀.၁ရာခိုင်နှုန်းကပဲ.. စိတ်ဝင်စားမိတယ်ထား…။
မြန်မာဝတ်စုံတခုက..ယူအက်စ်မှာ.. ၀ယ်ရင်.. ဒေါ်လာ ၃-၄ဆယ်ပေးရတယ်..။
သင်္ချာကိန်းလေးချကြည့်ရင်… ဒေါ်လာသန်း၂၀၀ကျော်.. စီပွားရေးပဲ..။
အလုပ်အကိုင်တွေဖြစ်..၀င်ငွေတွေရတော့.. အတွင်းခံကို..ဗစ်တိုးရီးယားစီးကရက်..၀ယ်ဝတ်နိုင်တာပေါ့နော…။ မြန်မာတွေလူနေမှုအဆင့်အတန်း…. တလှမ်းရှေ့တက်လာတာပေါ့နော…။
… ထိုင်းက..အဲဒီဈေးကွက်အကုန်သိမ်းဆွဲသွားဖို့တော့.. မြင်နေပြန်တာပါပဲ..။
အခုတောင် မြန်မာ အကျီ င်္လေးတွေ ပြန်ခေတ်စားလာပါပြီ ။
ပြောမဲ့သာပြောတာ ဈေးကလည်း ပိုကောင်းလာတယ်…။
ခရစ်စတယ်လုံးလေးတွေနဲ့ ချည်ထမိန်လေးတွေ အဆင်စုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်း ပိုများလာပြီ ။
မြန်မာအင်္ကျီတွေ တကယ်တမ်းတန်ဖိုးကြီးပါတယ်
ချည်ပိုးသားအကောင်း ချုပ်ပြီးသားတစ်ထည်ကို ၇၀၀၀ကျော်အနည်းဆုံးပါ
သာမန်တရုတ်၊ ထိုင်းကလာတဲ့ တီရှပ်၊ စပို့ရှပ်၊ ဘလောက်တွေထက် ဈေးမြင့်ပါတယ်
ဈေးတူချင်းဆိုလည်း မြန်မာအင်္ကျီက ပိုခိုင်ခံ့ပြီး ချည်ရဲ့အသားကသက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်
သေချာပြန်တွေးတော့ မြန်မာအင်္ကျီတွေက ပိုတန်ပါတယ်
တီရှပ်၊ စပို့ရှပ်၊ ဘလောက်တွေထဲမှာ သောင်းကျော်တန်တွေရှိပါတယ်
တကယ်တမ်းကျတော့ မြန်မာပြည်ရာသီဥတုနဲ့ကတော့ မြန်မာအင်္ကျီတွေက ပိုသင့်တော်ပါတယ်
ကျန်းမာရေးလည်း ညီညွတ်တယ်၊ ဈေးလည်းသက်သာတယ်
poochပြောတဲ့ မြင်းခြံချည်ထည် ၀မ်းဆက်ဆိုရင် ၃၅၀၀ကျပ်ဝန်းကျင်ပါ
တရုတ်ကလာတဲ့ အဲလိုဝမ်းဆက်လေးတွေလည်း ရှိပါတယ် (ချည်သားတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဆွဲသားတွေ)
ဈေးက သိပ်မတိမ်းမယိမ်းဆိုပေမယ့် ခိုင်ခံ့မှုနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကတော့ ကွာပါတယ်
ဟိုကတော့ ဒီဇိုင်းကအစ ပိုလှတာပေ့ါ
နိုင်ငံခြားသားတွေအတော်များများလည်း မြန်မာ့ချည်ထည်ကို တော်တော်ကြိုက်ကြတာကို သွားရင်းလာရင်းတွေ့လို့ သိရပါတယ်
၀တ်လို့ကောင်းလို့ရယ်၊ မြန်မာအင်္ကျီအတော်များများက ဟန်းမိတ်လုပ်တာကြောင့် လို့ထင်ပါတယ်
ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လည်း တန်လွန်းလို့ပါ၊ ဟန်းမိတ်တွေဆို နိုင်ငံခြားမှာ ဈေးကြီးတယ်ကြားဖူးတာပဲ
မြန်မာဝတ်စုံတွေက ကောင်းလဲကောင်း လှလဲလှဈေးလဲကြီးဆိုတော့ ပွဲထိုင်သဘောမျိုးဘဲဝတ်ချင်တယ်။